Nagu saabsan - HANGZHOU LINAN HUASHENG DAILY NILAASHOOYINKA CO., LTD
Waxaan nahay soo saaraha xirfadle ah ee alaabta nadiifinta aan tolmo wanaagsan leh tan iyo sanadkii 2003,
Waxaan nahay ganacsi qoys leeyahay, qoysaskeena oo dhami waxay naftooda u hurayaan warshadeena.
Kala duwanaanta wax soo saarku waa mid ballaaran, inta badan waxay soo saartaa shukumaanno la tirtiray, masaxaad qalalan, mashiinka jikada lagu nadiifiyo, tuwaalada duudduuban, masaxada masaxayaasha, masaxaadda qalalan ee ilmaha, mashiinnada nadiifinta ee warshadaha, maaskaro wajiga oo la cadaadiyo, iwm.
Warshaddeena waxaa ansixiyay SGS, BV, TUV iyo ISO9001. Waxaan haynaa koox xirfadlayaal ah oo falanqeynaya wax soo saarka, waaxda QC iyo kooxda iibka.
Waxaan haynaa aqoon-isweydaarsi nadiif ah oo heer caalami ah oo toban-kun gaaraya. Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu soo saaray aqoon isweydaarsi nadiif ah.
Waxaan haynaa 15 nooc oo qalabka wax lagu duubo ah oo loogu talagalay tuwaallo la isku qasbay iyo maaskaro wajiga oo la cadaadiyo.
Waxaan haynaa 5 xariiq oo wax soo saar ah oo lagu soo saarayo tuwaallo duudduuban si aan u qancino baahida macmiilka aan hadda leenahay, waxaana soo saaraynaa qalab cusub.
Waxaan haynaa 3 xariiq oo wax soo saar ah oo soo saaraya mashiinada qalalan ee bacda ku jira.
Maamulaheena, oo ah aabaheena, xirfadle u ah mashiinada oo dhan, sidaa darteed mashiin kasta oo aqoon isweydaarsigayaga ah isagaa iskiis u hagaajiyay oo leh muuqaal u gaar ah. Waxay ka dhigeysaa badeecadeena mid aad u fiican oo leh awood wax soo saar sare.
Ilaa hadda, ku dhowaad dhammaan macaamiisha ayaa ah lamaanayaasheena ganacsiga muddada-dheer. Waxaan dhiseynaa xiriir ganacsi oo ku saleysan qiimaha tartanka, tayada wanaagsan, waqtiga hogaaminta oo gaaban iyo adeeg wanaagsan.
Waxaan rajeyneynaa inaad adigana nala noqon doontid!
Waxaan ku siin doonaa alaab iyo adeeg ku qanacsan.
Waxaan haynaa tababar kooxda iibka ah si aan kor ugu qaadno nafteena. Kaliya maahan xiriirka macaamiisha, laakiin sidoo kale adeegga macaamiisheena.
Waxaan higsaneynaa inaan siino adeegga ugu fiican macaamiisheenna, ka caawinno macaamiisheenna inay xalliyaan dhibaatooyinka inta lagu jiro isgaarsiinta baaritaanka.
Macaamiil kasta ama macaamil macquul ah, waa inaan sifiican ula dhaqannaa iyaga. Macno malahan inay amar naga dhigayaan iyo in kale, waxaan ku ilaalineynaa dabeecadeena wanaagsan iyaga ilaa ay ka helaan macluumaad ku filan oo ku saabsan alaabtayada ama warshadeena.
Waxaan siineynaa shaybaarro macaamiisha, waxaan siineynaa xiriir wanaagsan oo Ingiriis ah, adeeg ayaan ku siineynaa waqtigiisa.
Tababarka iyo la xiriirka dadka kale, waxaan ogaanay dhibaatadeena hada jirta waxaanan ku xallinaa dhibaatooyinka waqtigooda si aan nafteena horumar ugu gaarno.
Markaan lahadalno kuwa kale, waxaan kaheleynaa macluumaad dheeri ah aduunka. Waxaan wadaagnaa waayo-aragnimadeena oo aan wax kala barannaa.
Tababbarka kooxdani ma aha oo kaliya inuu naga caawiyo hagaajinta xirfadaha shaqada, laakiin sidoo kale ruuxa la wadaagga dadka kale, farxad, walaac ama xitaa murugo.
Tababar kasta kadib, waxaan ognahay inbadan oo ah sida loola xiriiro macaamiisha, ogaano baahidooda loona gaaro wada shaqeyn lagu qanco.
Macaamiisha booqashada ku joogta Faransiiska
Bandhigga Dubai ee sanadka 2016
Bandhigga Dubai ee sanadka 2017
HongKong Hadiyadaha Bandhigga ee sanadka 2016
Macmiilka Booqashada ee Yurub sanadka 2017
Bandhigga Japan ee Osaka sanadkii 2015
Bandhigga Booland ee Warsaw sanadkii 2016
Carwada Canton ee sanadka 2015